Mee ka Mac gị dịkwuo mma site na iji ngwa a wee chekwaa ọtụtụ narị euro | Esi m mac
Mee ka Mac gị dịkwuo mma na ngwa ngwa a ma chekwaa ọtụtụ narị euro
N'abalị nke akwa mmiri ogologo na ekele, na Esi m mac Anyị agaghị enye gị otu onyinye, mana ise, ka ị ghara inwe nke abụọ iji gwụ gị ike ma ọ bụrụ na, dị ka m, ị ga-anọ n'ụlọ maka ụbọchị ole na ole sochirinụ.
Ọ bụ mkpọ ise nke ị nwere ike iji debe Mac gị ma dịkwa nchebe, na mgbakwunye na ịmepụta weebụsaịtị na ụzọ dị mfe ma ọ bụ were foto gị zuo oke. Otu mkpọ nke uru ya ruru $ 350 nke ị nwere ike nweta naanị euro ole na ole. ichoro ima ihe o bu gini?
Gịnị ka a mkpọ ngwa maka Mac gụnyere?
Dika anyi kwurula, "Nchikota" nke ngwa oru na akụrụngwa maka Mac nwere ngụkọta nke ngwa 5 nke bụ ihe ndị a:
TechTool Pro 9.5. Ọ bụ ngwá ọrụ nke ị nwere ike debe Mac gị n'izu oke ịrụ ọrụ Ọfọn, ị nwere ike ịme nyocha zuru oke, gụnyere motherboard, fans na ndị ọzọ, si otú a na-atụ anya nsogbu ọ bụla nwere ike ịda.
RapidWeaver 7. Ngwaọrụ maka ndị chọrọ wuo ibe weebụ ma ha enweghi ihe omuma HTML. Na RapidWeaver 7 ha ga-enweta nke a ekele ya "mfe na inweta interface".
Aka pụọ. Sọftụwia dị ike nke ị nwere ike zere ntaneti data ma kpuchido nzuzo gị.
Ihe ngosi AfterShot Pro 3. Ọ bụ ngwa nke Raw foto na-edezi Ekele nke ị ga-enwe ike bulite ma dezie foto gị na ogo dị elu mana na-enweghị ịta ahụhụ nnukwu faịlụ nha nke usoro a na-eweta. AfterShot Pro 3 na-enye gị njikwa zuru oke na ọkachamara na foto gị, na-ewere ihe okike gị na ọkwa ọhụrụ.
MacCleanse 6. Na ikpe azu, nka sistemụ nhicha maka Mac Na nke i nwere ike ịhụ na ihichapụ na kọmputa gị ọ bụla mmewere na-emetụta ya arụmọrụ na n'ụzọ dị otú a, gị Mac ga-arụ ọrụ dị ka lorịị dị ka ụbọchị mbụ.
Gwọ ngwa a bụ $ 350, agbanyeghị ugbu a na maka ụbọchị ise sochirinụ, ị nwere ike nweta ihe na-erughị $ 15. Gaa na ebe nrụọrụ weebụ nkwalite, chọpụta ihe niile gbasara ngwaọrụ ndị a ma jiri onyinye a mee ihe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Mee ka Mac gị dịkwuo mma na ngwa ngwa a ma chekwaa ọtụtụ narị euro
Apple ji ihe ndapụta ebe ụlọ ọrụ na-akwụ ụtụ isi na mba ebe ọ na-ere ahịa
Nkeji iri na ise a adịchaghị mma maka ire ahịa Mac, mana ọ bụghị maka PC